အိမ်က မိန်းမကို နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိုရွှေအမျိုးသားများ ရဲ့ လူမသိသူမသိ ကြေကွဲဖွယ်ရာ ဇာတ်သိမ်းများ – Nyi Ma Lay
အိမ်က မိန်းမကို နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိုရွှေအမျိုးသားများ ရဲ့ လူမသိသူမသိ ကြေကွဲဖွယ်ရာ ဇာတ်သိမ်းများ
By Nyi Ma LayPosted on October 9, 2021
အိမ်ထော င်စုတ စ်ခုမှာ အမျိုးသား ကမိသားစု စားဝတ်ေ နရေးအတွက်ပို က်ဆံရှာ ရပေမယ့် အမျိုးသမီးေ တွအေ နနဲ့ကတော့ အိမ်ရှင်မကော င်းပီပီ ချက်ပြုတ် ၊လျှော်ဖွတ်၊အိ မ်သန့်ရှ င်းရေးစတဲ့ အိမ်မှု့တာဝန်တွေ ကိုထမ်းေ ဆာင်ရပါ တယ်။ ဒီအလုပ်တွေ ကိုနေ့စဉ်လု ပ်နေရတဲ့အတွ က်ပင်ပန်းလာတဲ့ အခါမှာေ တာ့ ဒေါသတွေ ထွက်လာကြပါတယ်။
အခုလည်းအ ဝတ်လျှော်ရင်းေ ဒါသထွက်ေ နတဲ့အမျိုးသမီးကိုနို င်တယ်ဆိုတာသ က်သေပြ ချင်လို့သွားစေ နာက်လိုက်တဲ့အမျိုး သားရဲ့ဇာတ်သိမ်း ကတော့ မလှခဲ့ပါဘူး။
အမျိုးသားက သူ့သူငယ်ချင်းေ တွရှေ့မှာသူ့အမျိုးသ မီးကိုဘယ်လောက်နို င်ကြောင်းကြွား ချင်စောနဲ့အဝတ်လျှော်ေ နတဲ့အမျိုးသမီး ကို ”နင်အဝတ်ေ လျှာ်ပီးရင် ငါခြေထောက်တွေ အရမ်းညောင်းေ နလို့ နှိပ်ပေးရမယ်…..” လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။
အဲ့အချိန် မှာအမျိုးသမီးကအ ဝတ်လျှော်တာ ပင်ပန်းရ တဲ့ကြားထဲလေသံ မာမာနဲ့အမိန့်လာေ ပးရမလား ဆိုပြီးဒေါသထွက် ကာအဝတ်ေ လျှာ်နေတဲ့ တုတ်နဲ့ “ဒီခြေထောက်လား ညောင်းနေ တာကဆိုပြီး အားရပါးရ ရိုက်ချလိုက်တာ ခြေထောက် ကျိုးသွားပါတော့တယ်။”
သူငယ်ချင်းတွေလဲ အခြေအနေ မကောင်းလို့ ဝင်တောင် မတားတော့ပဲ အကုန်လုံး ပြေးပြီး အိမ်ကို ပြန်သွားကြပါတော့တယ်။ ပရိသတ်တွေလဲ ဒီဖြစ်ရ ပ်လေးကို ကြည့်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေရှေ့မှာ အမျိုးသမီးကိုနိုင်ကြောင်း ဘယ်တော့မှ မပြောမိပါစေနဲ့နော် …….
အိမ္ေထာ င္စုတ စ္ခုမွာ အမ်ိဳးသား ကမိသားစု စားဝတ္ေ နေရးအတြက္ပို က္ဆံရွာ ရေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးေ တြအေ နနဲ႕ကေတာ့ အိမ္ရွင္မေကာ င္းပီပီ ခ်က္ျပဳတ္ ၊ေလွ်ာ္ဖြတ္၊အိ မ္သန႔္ရွ င္းေရးစတဲ့ အိမ္မႈ႕တာဝန္ေတြ ကိုထမ္းေ ဆာင္ရပါ တယ္။ ဒီအလုပ္ေတြ ကိုေန႕စဥ္လု ပ္ေနရတဲ့အတြ က္ပင္ပန္းလာတဲ့ အခါမွာေ တာ့ ေဒါသေတြ ထြက္လာၾကပါတယ္။
အခုလည္းအ ဝတ္ေလွ်ာ္ရင္းေ ဒါသထြက္ေ နတဲ့အမ်ိဳးသမီးကိုနို င္တယ္ဆိုတာသ က္ေသျပ ခ်င္လို႔သြားစေ နာက္လိုက္တဲ့အမ်ိဳး သားရဲ႕ဇာတ္သိမ္း ကေတာ့ မလွခဲ့ပါဘူး။
အမ်ိဳးသားက သူ႕သူငယ္ခ်င္းေ တြေရွ႕မွာသူ႕အမ်ိဳးသ မီးကိုဘယ္ေလာက္နို င္ေၾကာင္းႂကြား ခ်င္ေစာနဲ႕အဝတ္ေလွ်ာ္ေ နတဲ့အမ်ိဳးသမီး ကို ”နင္အဝတ္ေ လွ်ာ္ပီးရင္ ငါေျခေထာက္ေတြ အရမ္းေညာင္းေ နလို႔ ႏွိပ္ေပးရမယ္…..” လို႔ေျပာလိုက္ပါတယ္။
အဲ့အခ်ိန္ မွာအမ်ိဳးသမီးကအ ဝတ္ေလွ်ာ္တာ ပင္ပန္းရ တဲ့ၾကားထဲေလသံ မာမာနဲ႕အမိန႔္လာေ ပးရမလား ဆိုၿပီးေဒါသထြက္ ကာအဝတ္ေ လွ်ာ္ေနတဲ့ တုတ္နဲ႕ “ဒီေျခေထာက္လား ေညာင္းေန တာကဆိုၿပီး အားရပါးရ ရိုက္ခ်လိဳက္တာ ေျခေထာက္ က်ိဳးသြားပါေတာ့တယ္။”
သူငယ္ခ်င္းေတြလဲ အေျခအေန မေကာင္းလို႔ ဝင္ေတာင္ မတားေတာ့ပဲ အကုန္လုံး ေျပးၿပီး အိမ္ကို ျပန္သြားၾကပါေတာ့တယ္။ ပရိသတ္ေတြလဲ ဒီျဖစ္ရ ပ္ေလးကို ၾကည့္ၿပီး သူငယ္ခ်င္းေတြေရွ႕မွာ အမ်ိဳးသမီးကိုနိုင္ေၾကာင္း ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာမိပါေစနဲ႕ေနာ္ …….
Previous post ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအဖြစ် ယနေ့ထိတိုင် ပင်လယ်ကြမ်းပြင်အောက် ထဲမှာ နစ်မြုပ်နေတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း ယာဉ်ပျံကြီး
Next post အလုပ်ပြုတ် သွားပြီးနောက် စကားမပြောပဲ Video တွေတင် ခဲ့ရာကနေ အောင်ြ မင်ကျော်ကြား လာသူ